Ka hel halkan buugaagta ugu fiican ee Kate Morton, 2022
3 buug ee ugu fiican Kate Morton
Kuwo badan ayaa ah qorayaasha doonaya dheelitirka sixirka ah ee u dhexeeya walaxda iyo qaabka, inta u dhexeysa ficilka iyo milicsiga, inta u dhexeysa dulucda iyo qaab dhismeedka oo ku dhammaada iyaga oo kor u qaada heerka ugu iibiyaha adduunka. Waxaa jira kuwa aakhirka noqda sayidyada xiisadda sheekada sida Joel dicker iyagoo leh imaanshahooda iyo tagitaankoodii hore ilaa hadda iyo mustaqbalka iyagoon waligaa kuu oggolaan inaad ku lumiso kala -guurka. Kuwo kale ayaa ah sayidyada farshaxanka dhaqameed ee sheekooyinka qadiimiga ah, sida Ken Follett, qaar kale oo badan Stephen King wuxuu maamulaa inuu nagu dabin maqaarka maqaarka jilayaasha gabi ahaanba naxariista leh.
Of Dufan Kate waa wanaagga u dhexeeya firfircoonaanta iyo qoto -dheeraanta sheekada, inta u dhexeysa dejinta iyo milicsiga laga arkay jilayaasha. Iyada oo si guul leh loo maareeyo isu dheelitirnaanta suugaanta ciriiriga ah, arrin kasta oo la soo jeediyo waxay ku dambaysaa in la saxo. Sababtoo ah waxa kaliya ee la hubo ayaa ah in sida sheekada loo sheego ay aad uga muhiimsan tahay waxa la sheegayo.
Sanadkii 2007dii Buuggii ugu horreeyay ee Kate Morton, Guriga Riverton, iyo iyada oo leh guusha degdegga ah iyo ku -celcelinta adduunka ee saamaynta suugaaneed Kate Morton, qoraa ka soo jeeda noocyada qarsoodiga ah dhinacyo aad u ballaadhan, oo leh dhinacyo badan oo cusub oo aakhirka horseedaya qulqulka sheekooyin mar walba la yaab leh akhristayaasha dunida oo dhan.
3 Novels lagu taliyay Waxaa qoray Kate Morton
Grace Bradley waa haweeney waayeel ah oo jecel, oo leh qoto dheer oo damqasho leh. Awoowe -yaasha caadiga ah ee aad u malaynayso in laab kasta oo laalaabkeeda ahi uu waayo -aragnimo ka helo waqti fog oo xiiso leh.
Laakiin kiiska Grace Bradley waa halkii haweeney, oo timid xilligii ay qaangaarnimada ugu gaabisay albaabada dhimashada, go'aansato inay la xiriirto cutubka ugu xun ee nolosheeda. Wuxuu fahamsan yahay in sida ugu wanaagsan ay tahay in looga tago markhaatiga wixii dhacay shaqsi ahaan, ee awowgiis Marcus.
Oo sidaas ayaynu ku galaynaa sheeko cajiib ah laga soo bilaabo horraantii qarnigii labaatanaad, oo leh jawi midabkeedu yahay kala -soocidda wakhtiga. Grace waxay tagtaa guriga Riverton si ay uga shaqayso adeegga. Waxa ka dhacaya daqiiqadaas waxaa loo tarjumay sheeko sheeko xamaasad leh, iyada oo qalloocyo la yaab leh ay ku hoos jiraan jawiga qarnigii sagaal iyo tobnaad ee horraantii qarnigii labaatanaad.
Ismiidaaminta gabayaaga Robbie Hunter ayaa na ka qaadeysa waqtigan xaadirka ah, kaas oo dokumentariga loo diyaariyey dabeecadda ilaa waagii hore, kaas oo aan ku ogaanno runta oo dhan oo ku saabsan ...
Iibso mar hore
Sagootintii u dambaysay
Haddii kulankiisii ​​ugu horreeyay ee Kate Morton uu ahaa heer sare oo caan ah oo ku jira hiddaha qarsoodiga ah, sheekadan ayaa la daabacay dhawr sano ka dib oo lagu dhex milmay buugaag kale, waxay dib u soo ceshanaysaa isla nuxurkii hore sidii balli biyo mugdi ah oo ay ku hoos qarsoon tahay run waalan dushiisa.
Ka maqnaanshaha Theo yaraa 1933 -kii oo ka mid ahaa buuraha duurjoogta ah iyo dooxooyinka ayaa ahaa xidhitaan been ah oo aad u weyn oo taariikhda madow ee meesha. Wiilkii saboolka ahaa lama maqal oo murugadii baa fidday oo reerkiisii ​​ku riixday inay meesha ka baxaan.
Sadie Sparrow waa kormeeraha booliiska London oo waqtigeeda fasaxa ku qaata inay ku lunto cagaarka Cornwall oo ku qasan badda Celtic ee kacsan.
Sixirka jaaniska, sida magnetism -ka aan la dafiri karin, wuxuu Sadie u horseedaa meel bannaan oo ay ka buuxaan jabaqyadii hore taas oo Theo noloshiisii ​​lagu hakiyay hubanti la’aan iyo cabsi.
Dhalashada qarsoodiga ah
Maalmihii ugu dambeeyay ee Dorothy waxay isu beddelaan dhulgariir ku xeeran qarsoodi quseysa qoyska oo dhan taas oo ka hor Dorothy lafteeda ay ka dooddo ku habboonaanteeda si runtu u soo baxdo, wax walba u carqaladeyso.
Si la mid ah, Laurel Nicholson sidoo kale waxay uga qaybqaadataa sirta sidii walaasheed ka weyn, xaqiiqdii iyadu waa tan kaliya ee haysata furaha ay ku geli karto meeshaas waqtiyadii la soo dhaafay halkaas oo ay ku qarsoon yihiin tafaasiil u muuqata wax dhib leh.
Qarsoodigu wuxuu ka bilaabmaa 1961, markii Laurel uu horey u ahaa gabar aqoon leh oo ay ahayd inay ka magan gasho dhacdooyinkii dhacay. Laurel hadda waa aktarad leh xirfad dheer oo sannado badan masraxa ka dib, waxay u malaynaysaa in maalintaas hooyadeed dhalashadeedii u dambaysay ay tahay inay ka fiirsato waxa kiciyay dhacdooyinkii fogaa 1961 -kii.
Dhammaantood waxay bilaabeen waqti hore, gadaal 1941 London. Qorshuhu wuxuu u dhaqaaqayaa laxanka daahfurka Laurel iyo walaalkeed Gerry, khiyaano, musiibo, badbaado sanado adag oo mugdi ah Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Inta u dhaxaysa buugaagtii hore iyo sawirradii waqtiyadii kale, waxaan soo diyaarinaynaa sheeko si buuxda uga jawaabeysa baahida aan u qabno si aan u ogaano qarsoodiga qoyska Nicholson.
Tags Dufan Kate
5 faallooyin ku saabsan "3 buug oo ugu fiican Kate Morton"
24/04/2022 saacadu markay tahay 5:13 PM
Salaan, waxaan filayaa in mid ka mid ah buugaagta ugu wanaagsan ee Kate Morton uu yahay Beerta la iloobey, maadaama ay ku geynayso dekeddaas halkaas oo inanta yar laga tagay, sheekada laga sheegay halkaasna ay tahay mid soo jiidasho leh, midda kaliya ee aanan akhriyin waa. Dhalashada sirta ah.
25/04/2022 saacadu markay tahay 8:07 PM
Waad ku mahadsan tahay Magaly fikraddaada.
Pingback: Susanne Goga 3da buug ee ugu wanaagsan ›Janaayo 2022
Pingback: 3 buug ee ugu wanaagsan Liane Moriarty ›Sebtember 2021
Pingback: Soo hel 3 -da buug ee ugu fiican Jane Harper ›Abriil 2021